မိမိကိုယ်ကို ဦးဆောင်နိုင်မှုအကြောင်း – How She Did It
by Tin Ma Ma Htet
BlogCareer-loving WomenWomen EntrepreneurshipWork-life Integration |3mins
ကိုယ့်အသိထဲမှာ ဘဝကိုတဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတွေဆိုတာ ရှိမှာပေါ့၊ အနည်းဆုံးတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ဖူးမယ်ထင်တယ်နော်။ ငယ်တုန်းက အရမ်းရှက်တတ်ကြောက်တတ်တယ် ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေတယ်၊ လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့စကားထွက်ပြောနိုင်တယ်။ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဘဝကလာပေမယ့် အခုချိန်မှာ ပိုမြင့်မားတဲ့နေထိုင်မှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး မိဘတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ အရင်တုန်းက အရမ်းဆိုးသွမ်းပြီး လူတွေကိုဒုက္ခပေးသူတစ်ယောက်က အခုချိန်မှာ လူတွေကိုကြင်နာပြီးဖေးမတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလူတွေအားလုံးမှာ တူညီတဲ့အချက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ယုံကြည်ကြတယ်။
ကိုယ့်ဘဝမှာရော ဒီလိုလက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲချင်တာမျိုးရှိလား? ဥပမာ – အားနာတတ်တဲ့အကျင့်ကို ဖြတ်ပြီး “no” လို့ပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်အကူအညီကို လိုအပ်လို့တောင်းရာကနေ မလိုလဲခေါ်ခိုင်းပြီး ကျေးဇူးမတင်တဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတဲ့အခြေအနေတွေ၊ မလုပ်နိုင်ဘူးပြောမိလို့ ကိုယ်စိတ်မကောင်းအောင် ပြောခံရတဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအကျင့်ကိုပြင်ချင်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်သူတွေကလည်းပြောနေပြီး “အားမနာသင့်တော့ဘူး၊ ဒီအကျင့်ကိုပြင်တော့။” ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါ အရမ်းခက်ခဲလို့ အရင်လိုပဲ “yes” လို့ပြောမိပြန်တယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဆိုးမိတယ်။
နောက်ဥပမာတစ်ခုက – အင်္ဂလိပ်လိုမွှတ်နေအောင်ပြောတတ်ချင်တယ်။ အခုချိန်မှာ ဘယ်လိုမှပြောဖို့မရဲဘူး၊ သူများပြောတာကိုပဲအရမ်းအားကျမိတယ်။ ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်ရင် ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းကိုပွင့်စေနိုင်တာလဲသိတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေ ကျောင်းကပြန်လာရင် ကိုယ့်ကိုဘိုလိုမှုတ်တဲ့အခါမှာလဲ ကိုယ့်ကသူတို့နဲ့အပြန်အလှန်ပြောတတ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် သင်တန်းတွေလဲခဏခဏအပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ခဏခဏပျက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့လည်နေတာ အခုထိမပြောနိုင်သေးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမရဘူးဖြစ်မိတယ်။
ဒါဆိုသူများတွေကဘာကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်တာလဲ? ကိုယ်ကရော ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးလား? ဒီအချက်ကလေး (၃) ခုကိုအရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်။
ဘာကိုပြောင်းလဲချင်တာလဲဆိုတာကိုပဲသိလို့မရဘူး၊ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲချင်တာလဲ ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ ဘယ်လိုပြောင်းလဲဖို့လိုလည်းဆိုတာကို လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားလို့ရမယ်။ ဥပမာ – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာချင်တယ်ဆိုရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ဘာကြောင့်လေ့လာချင်တာလဲ? အလုပ်မှာ report ရေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာအရေးကျွမ်းကျင်ရမယ်။ ဒါဆို academic ဆန်တဲ့အရေးအသားမျိုးကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ ဒီလိုသင်တန်းတွေပေးတဲ့နေရာမှာ သွားတတ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရေး၊အဖတ်၊အပြော ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ရမယ်။ ဒါဆိုရင် ဒါတွေအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့သင်တန်းကိုတတ်ရမယ်။ Awareness ဆိုတာ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်သိတာ။
ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ခရီးလမ်းကရှည်တယ်၊ တစ်ခါတစ်လေခက်ခဲတယ်။ အဆင်မပြေတာတွေဆိုတာ ကြုံရမှာပါပဲ။ အဲ့ဒီအခါမှာ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိဖို့ အရမ်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်မရှိရှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျင့်နေတုန်း လူတွေရှေ့မှာ အမှားပြောမိရင် “ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘာကြောင့်ဒီသင်တန်းလာတတ်မိတာလဲ။ နောက်ဆိုကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ မလိုက်လျောတော့ဘူး” ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်တတ်တယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရင် “ဒီနေရာလေးမှားသွားတယ်၊ နောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်ရင်တော့ ငါတော်တော်တိုးတက်သွားမယ်” အကောင်းမြင်စိတ်က learning process ကိုလည်းပျော်စရာကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးတယ်။ လူ့စိတ်က ပျော်စရာမကောင်းရင် ရေရှည်မလုပ်ချင်ဘူးလေ။
ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုပဲ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ သူများပြောမှလုပ်ရင်၊ သူများမပြောတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ဦးတည်ရာမဲ့သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဟာတစ်နေ့ကို တစ်နာရီ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှမသိလည်း ကိုယ်လေ့ကျင့်ရမယ့်အချိင်္နှာ ကိုယ်ကျင့်တယ်။ ဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းလဲ ကိုယ်လုပ်တယ်။ သူများတွေလာတားရင်တောင် ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလေ့အကျင့်မပျက် ဆက်လုပ်တယ်။
အပြင်လူတွေအနေနဲ့သာ ဒီလူရဲ့ဘဝက တဆစ်ချိုးကြီးပြောင်းလဲသွားပါလားလို့ ထင်ကြပေမယ့်၊ တစ်ကယ်တန်းတော့ သူ့အတွက်ကတစ်နေ့နဲနဲ တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ဇွဲရှိရှိသွားရတဲ့ ခရီးလမ်းရှည်ကြီးတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဟာ လက်ရှိအခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲချင်သူဆိုရင် ဇွဲရှိဖို့လိုမယ်။
ကယ်.. လက်ရှိအခြေအနေထဲက ဘာကိုပြောင်းလဲမလဲ?
Mizzima TV မှာ ကျွန်မပြောဖြစ်တဲ့ ဒီအကြောင်းကိုပိုပြီး သသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပါ။
#HowSheDidIt #PersonalLeadership #PersonalDevelopment